Sajhasawal.com.np | Homeभारतमा एकै दिनमा दुई लाख ६१ हजार कोरोना सङ्क्रमित, १५०० को मृत्यु
ओली सरकारको भूलैभूलको रवैया
चिकित्सक सहितको टोली लिएर गोरखा हिंडे नारायणकाजी
सबै अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न मुख्यमन्त्री पौडेलको निर्देशन
प्रधानमन्त्रीको शपथ र सात मन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन
राष्ट्रियसभा निर्वाचनः ७२ घण्टाभित्रको पिसिआर रिपोर्ट देखाउनुपर्ने
गाउँभरि ज्वरोका बिरामी, परीक्षण गरेका अधिकांशमा कोभिड–१९ सङ्क्रमण
सर्वोच्चको आदेश - उपचार अभावले मृत्यु हुने अवस्था नआओस्
नेप्से ऐतिहासिक उचाईमा, यी हुन् सर्वाधिक कारोबार भएका कम्पनीहरु
निषेधाज्ञा अवधिभर इमेलबाटै बैंक खाता नवीकरण गर्न बैंकर्स संघको आग्रह
नबिल आइ कार्डको निवेदन वेबसाइटबाटै दिन मिल्ने, कार्ड नजिकको शाखाबाट लिन सकिने
प्रभु बैंकले जेठ ११ गतेदेखि ऋणपत्र निष्काशन गर्ने, कति पाइन्छ ब्याज ?
सुनको भाउ प्रतितोला ३ सय बढ्यो, कतिमा हुँदै छ कारोबार ?
अस्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा आगामी सन् २०२२ को मध्यसम्म खुला नगर्ने संकेत
कोरोना भाइरस विरुद्धको औषधि तयार , भारतले आज सार्वजनिक गर्दै
कोभिड–१९ महामारीबीच गङ्गा नदी किनारामा शवको थुप्रो
इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वमा मारिने १८८ जना, अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा युद्ध रोक्न आग्रह
दुतावासका कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण, अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि सेवाहरु स्थगित
वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी खड्काको कोरोना संक्रमणबाट निधन
खाडीबाट नेपालीले पठाए ५ सय ६० वटा अक्सिजन सिलिन्डर, आइतबार हस्तान्तरण हुने
भाग्यमानी चौधरी : ४ महिनामै बने तेश्रो पटक श्रममन्त्री
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष गैरेको निधन
भारतमा एकै दिनमा दुई लाख ६१ हजार कोरोना सङ्क्रमित, १५०० को मृत्यु
Posted on: 18 Apr, 2021
वैशाख ५, नयाँ दिल्ली । भारतमा कोरोनाभाइरसबाट एकै दिनमा दुई लाख ६१ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित भएका छन् ।
“एकै दिनमा यति धेरै सङ्क्रमित भएको यो पहिलो पटक हो,” एक सरकारी उच्च अधिकारीले आइतबार भने । उनीहरुका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा भारतमा दुई लाख ६१ हजार ५०० जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् ।
त्यसैगरी सोही अवधिमा भारतमा एक हजार ५०१ जनाको कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु भएको पनि केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो विवरणसँगै भारतमा कोरोनाभाइरसबाट कुल मृतकको सङ्ख्या एक लाख ७७ हजार १५० पुगेको देखिएको छ ।
त्यसैगरी कोरोनाभाइरसबाट अहिलेसम्म कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक करोड ४७ लाख ८८ हजार १०९ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतमा अहिले पनि सङ्क्रमित अवस्थामै रहेकाहरुको सङ्ख्या भने १८ लाख एक हजार ३१६ पुगेको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
पछिल्लो २४ घण्टामा एक लाख ३८ हजार ४२३ जना कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमणमुक्त भएको विवरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । योसँगै अहिलेसम्म सङ्क्रमणमुक्त भएकाहरुको कुल सङ्ख्या एक करोड २८ लाख नौ हजार ६४३ पुगेको छ ।
भारतमा शनिबार मात्रै १५ लाख ६६ हजार ३९४ जनाको कोरोना परिक्षण गरिएको भारतीय मेडिकल रिसर्च काउन्सीलले जनाएको छ । अप्रिल १७ सम्म कुल २६ करोड ६५ लाख ३८ हजार ४१६ जनाको कोरोना परिक्षण गरिएको पनि काउन्सीलले उल्लेख गरेको छ ।
कोरोना भाइरसको महामारी फैलिने क्रम एकातिर चलिरहेको छ भने अर्को तर्फ कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप चलाउने क्रम पनि चलिनै रहेको छ । भारतमा अहिलेसम्म १२ करोड २६ लाख २२ हजार ५९० ओटा खोप खपत भएको छ । भारतमा अहिले कोभिसिल्ड, कोभ्याक्सीन र स्पुट्नीक भी गरी तीन प्रकारका खोपको प्रयोग भइरहेको सरकारी निकायहरुले जनाएका छन् ।
रुसले विकास गरेको स्पुट्नीक भी भने यही अप्रिल १२ देखि मात्रै लगाउन थालिएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।एएनआई